गरे के हुँदैन ? - Parichay Network
यी हुन् पोखरा परिवर्तन गर्ने आँट भएका स्मार्ट वडाध्यक्ष
परिचय नेटवर्क द्वारा	 २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १७:२७ मा प्रकाशित
पोखरा । बिहान ११ः ४५ मा वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्षको कोठाको नाम प्लेटमा भित्र लेखिए पनि उनी भित्र थिएनन् । खोज्दै जाँदा उनी कर्मचारीलाई काम गर्न अनुरोध गर्दै अर्को कोठामा भेटिए । देख्ने बित्तिकै मन्ध मुस्कान सहित एक छिन है भन्ने हातको ईशाराले थप व्रिफिङ गर्न थाले –“बत्ती गयो भन्दैमा हामीले काम रोक्नु हुँदैन, हातले कागजमा भएपनि लेखेर काम गर्दा तपाँईहरु (कर्मचारी) को पनि त स्किल बढ्छ नि, ल हातले भएपनि काम गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुस् है ?” उनको कोठामा जान भ¥याङ्ग उक्लदै भन्न थाले –“भर्खर लोडसेडिङ्ग भयो अनि सेवा त दिनै प¥यो, अनि दाई चिया खाउँ है ।” कुर्चीमा बस्दै उनले भने – “पहिला पहिला बाहिरबाट चिया मगाएर खाईन्थ्यो तर अहिले यहीँ बन्छ, बाहिर खाने एक दिनको चियाको खर्चले एक महिनालाई पुग्छ ।”
कुरा हुनै लाग्दा कालो भादगाउँले टोपी लगाएका अन्दाजी ४५ वर्ष जति देखिने पोखरा महानगरपालिका वडा नं १४ का उपभोक्ता जगन्नाथ तिमिल्सिना सरासर वडाध्यक्षको कोठामा छिर्दै भने –“ओ हो दर्शन जी, तपाँईले गरेको काम देख्दा निकै खुसी लागेर बाटो परेको हुँदा बधाई दिन मात्रै छिरेको ।” हो उनी हुन्, पोखरा महानगरपालिका वडा नं १३ का स्मार्ट वडाध्यक्ष दर्शन लामा ।
बिहान घामको झुल्कोसँगै वडामा छिर्ने वडाध्यक्ष लामा बेलुका घर पर्कने टुङ्गो भने कामका आधारमा मात्रै हुने बताउँछन् । उनी भन्छन् –“बिहान बेलुकी हाम्रा प्लानका बारेमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल मिटिङ्ग हुन्छ र कार्यालय समयमा सेवाग्राहीको काममा व्यस्त हुन्छु ।” कार्यालय छोडेर सकभर उनी बाहिर जाँदैनन्, जानै परेमा कति बेला गएको, कहाँ गएको, कति समय लाग्ने र कति बेला कार्यालयमा फर्कने सबै कुराको उत्तर सूचना बोर्डमा प्रस्ट लेखेर जाने चलन रहेको जानकारी समेत गराए ।
किन यति धेरै मरिहत्ते गर्छन् त कामका लागि ? उनको छोटकरीमा उत्तर छ –“हामीलाई काम गर्न भोट दिएका हुन् र मैले स्मार्ट वडा बनाउने घोषणापत्रको सपना बाँडेको छु, त्यसलाई कुनै हालतमा पुरा गर्नुपर्छ ।” चिया खान अनुरोध गर्दै भने – “त्यसको लागि हामीले महानगरमै पहिलो पटक हाम्रो वडामा डिजिटल बडापत्र राखेको छौं, जसमा हामीले गर्ने काम तथा सेवा बारे प्रष्ट उल्लेख छ ।” जबसम्म हरेक नागरिकलाई स्मार्ट बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म स्मार्ट वडा नहुने पनि उनको भनाई छ । उनले भने – “त्यसैको स्वरुप हामीले नागरिकहरुलाई स्मार्ट कार्डको वितरण पनि गरेका छौं ।” नेपालमै पहिलो पटक पोखरा १३ ले स्मार्टकार्ड अवधारणा ल्याएको दावी वडा कार्यालयको छ ।
वडा अध्यक्ष लामाले भने – “हामीले वितरण गर्ने स्मार्ट कार्ड २ प्रकारको कार्ड हुन्छ, एउटा व्यक्तिगत र अर्को पारिवारिक ।” स्मार्ट कार्डमा सबै विवरण र कार्य बारे प्रष्ट थाहा हुने भएकाले २ दिन लाग्ने काम पनि २ मिनेट मै हुने पनि उनको दावी छ ।
पोखरा महानगरका वडा मध्यमा वडा नं. १३ मात्रै यस्तो वडा हो जसमा सवै खालका नागरिकहरु पनि निर्वाध रुपले हिँडडुल गर्न सक्छन् । वडाले अपाङ्गमैत्री बाटो बनाइदिएको छ । वडा कार्यालय परिसर र त्यहाँ रहेको शौचालय अपाङ्गमैत्री छ । वडालाई वातावरणमैत्री बनाउन ‘ग्रिनी रोड’ को अवधारणा ल्याएको छ । उनले भने –“नमूनाका लागि ५ सय मिटर बाटोे ‘ग्रिनी रोड’ बनाइसकेको छ ।”
अब बन्ने सबै बाटो ‘ग्रिनी रोड’ अवधारणा सहित नै बन्ने पनि उनले जानकारी दिए । “बाटो बनाउँदा फुटपाथलाई पनि उच्च महत्व दिएका छौं ।” उनले अगाडि थपे – “टुङ्गिएका केही बाटोहरु बाहेक हाम्रा सबै बाटोहरु फुटपाथ सहितका छन् ।”
परिक्षणका रुपमा भद्रकाली स्कुल अगाडि एउटा ट्राफिक लाइट राखिएको छ । “विद्यार्थी वारपार गर्दा बटन थिँचे रातो बत्ती बल्छ । निश्चित समयपछि आफैं बन्द हुन्छ ।” उनले भने – “अहिले नमूनाका लागि मात्रै राखिएको र आगामी दिनमा वडाका सबै विद्यालय क्षेत्रका बाटामा ट्राफिक लाइट जडान गरिने छ ।” त्यति मात्रै होईन उनले अहिले आफ्नो वडामा भएका सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् । “सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम भयो भने विद्यालयको क्षमता थाहा हुन्छ, त्यसपछि कमजोर विद्यालयलाई सुधार गर्न सजिलो हुन्छ ।” उनले सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम राख्नुको कारण प्रष्ट पार्दै भने ।
उनको वडामा अहिले ७ वटा सामुदायिक र ७ वटा संस्थागत गरी १५ वटा विद्यालयहरु छन् । जसमा विद्यालयमा ५४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सामुदायिक विद्यालयको आर्कषण बढाउन उनले वडाका सबै विद्यालयको छुट्टै शैक्षिक क्यालेण्डर नै निर्माण गरेका छन् । जुन क्यालेण्डर नीजि विद्यालयको सँग मिल्छ । उनले भने – “सामुदायिक विद्यालयमा पनि नीजि विद्यालयकै जस्तो तरिकाले पढाई भयो भने को नीजिमा महङ्गो शुल्कमा पढ्छ र ?” उनले अगाडि थपे –“अबको शैक्षिक सत्रदेखि सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम हुनेछ ।
खानेपानी समस्या हटाउन ५० वर्ष पुग्ने पानीको स्रोतमा परियोजना सुरु गरी भईसकेको छ । आफ्नै वडामा खेर गएको काहुँखोलाको पानीलाई दिर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्न सर्वेक्षणको काम सुरु भई सकेको पनि उनको भनाई छ । बसिरहेको आसन परिवर्तन गर्दै उनले भने – “कुनै पनि ठाउँको संस्कृति, परम्परा बचाउन राज्यको पनि हात हुन्छ । त्यही अनरुप हामी यसमा गम्भीर छौं ।” उनी स्थानीय पञ्चेबाजा संस्कृति संरक्षण गर्न उनी कम्मरै कसेर लागेका छन् । उनी भन्छन् – “संस्कृति हाम्रो सम्पति हो र हाम्रो पहिचान हो, पहिचान हराए हामी हराउँछौं ।”
बेरोजगार समस्या अहिलेको सबै भन्दा ठुलो समस्या हो । वडा नं १३ मा पनि यो समस्या भएको उनको भनाई छ । त्यसैले उनले वडावासी महिला यूवालाई उद्यमी बनाउन वडाले आफ्नै लगानीमा दालमोठ उद्योग सञ्चालन गरेर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । उद्योगका लागि स्थानीयले ५ लाख लगानी गरेका छन् । “सुरुमा हामीले १८ जना महिलालाई तालिम दियौं । अहिले उहाँहरुले रोजगारबाट मासिक १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ राख्नुभएको छ ।” – लामाले भने । अहिले फेरी पुरुष युवालाई रोजगारीका लागि पुर्ण तालिम सहित सबै लगानी वडाकै रहने गरी महानगर भित्र जहाँ पनि शैलुन सञ्चालन गर्ने भन्दै वडाका बेरोजगार युवालाई आव्हान गरेको छ ।
कृषिमा पनि वडाले महानगरमै सबै भन्दा बढी लगानी गरेको छ । वडाका सबै कृषकलाई हौसला थप्न आवश्यकता अनुसारको सबै खालको सहयोग र आवश्यक परेमा आर्थिक सहयोग पनि निशुल्क नै गरेको छ । वडाले यो वर्ष मात्रै २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कृषि मै लगानी गरेको वडा अध्यक्ष लामाले जानकारी दिएका छन् । आफ्नो वडाको सुरक्षाका लागि पनि उनी उत्तिकै सचेत छन्, जसका लागि वडामा छिर्ने सबै नाकाहरुमा सिसिटिभी राखेका छन् । उनको वडामा प्रवेश गर्न ८ वटा नाका छन् । उनले भने – “वडा छिर्ने सबै नाकामा सीसीटीभी जोडेका छौँ, यसले हाम्रो सुरक्षालाई अझै बलियो बनाएको छ ।”